स्थानीय सरकारको भर : भूमिहीनलाई नमूना घर - Khula Patra
स्थानीय सरकारको भर : भूमिहीनलाई नमूना घर
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण ०९, २०७७
प्रकाशित समय: २२:००:२७
झापा । दमक नगरपालिकाले गत वर्ष नगरका भूमिहीनहरूका लागि २३ ओटा समान प्रकृतिका घर भएको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्‍यो ।
ती सबै घरमा यसअघि आफ्नो घर नभएका नगरका भूमिहीनहरूको बसोबास छ । दमक–१ मा नमुना एकीकृत बस्तीको रूपमा एकै प्रकारका घर निर्माण गरिएपछि फोटा खिच्नकै लागि पनि कतिपय व्यक्तिहरू यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।
यस वर्ष फेरि सोही नमूना बस्तीनजिकै वडा नं. ७ मा सोही प्रकृतिका १५ ओटा घर बनाइएका छन् । ती घर पनि यसै वर्ष नगरका भूमिहीन विपन्नहरूलाई हस्तान्तरण गरिने वडाध्यक्ष भीम पौडेलले बताएका छन् ।
यस्ता छन् घर
सिमेन्टको पक्की एक तले सबै घरको छोनोमा निलो रङको जस्तापात लगाइएको छ । प्रत्येक घरमा विद्युत र खानेपानीको व्यवस्था छ । घर वरिपरि सानो फूलबारी समेत रहने प्रबन्ध छ । प्रत्येक घरमा आधुनिक तरिकाले बनाइएका दुईवटा कोठा छन् । यसैसँग जोडिएको एउटा भान्छा कोठा छ । प्रत्येक घरमा मार्वल हालेर बनाइएको शौचालय—स्नानकक्ष छ ।
नगरका सबै भूमिहीन तथा विपन्न परिवारलाई क्रमिकरूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने लक्ष्यअनुसार पहिलो चरणमा २३ परिवारका लागि नमुना बस्ती निर्माण गरिएको नगरप्रमुख रोमथान ओलीको भनाइ छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जमिन व्यवस्थापन गरी घर निर्माण गरिएको हो ।
घर पाएपछि दङ्ग
जीवनभरि आफ्नो घर बनाउन नपाएकी मनमायाँ भुजेल अहिले आफ्नै घरमा बस्न पाउँदा दङ्ग छिन् । मजदुरी गरेर जीविकोपार्न गर्दै आएका टेकबहादुर थापा पनि नमूना बस्तीमा बस्न पाएर ढुक्क छन् ।
उनीहरू जस्तै कतै पनि आफ्नो जमिन र घर नभएकाहरू पहिलो नमूना बस्तीमा छन् । दोस्रो नमूना बस्तीमा पनि यस्तै विपन्न नागरिकहरूलाई बसाउने स्थानीय सरकारको योजना छ ।
नगरपालिकाले निर्माण गरेका घर पाउन नगरपालिकाले केही मापदण्ड बनाएको छ । नगरप्रमुख ओलीका अनुसार सो स्थानमा बसोबासका लागि नगरपालिकाभित्र कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरेको र कहीँ पनि जमिन नभएको परिवार छनौट गरिएको हो । यस्तै, दमक–७ को सुनचाँदी लाइनमा रहेको नगरपालिकाको जमिनमा बसोबास गरेका परिवारलाई पहिलो हकदार बनाइएको थियो ।
कुल ३ करोड ७० लाख रुपैयाँमा बस्ती निर्माण भएको हो । यसमा गरिएको बस्त तीनै तहका सरकारहरूको लागत सहभागिता छ । बस्ती निर्माणमा संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको १ करोड ४० लाख, प्रदेश सरकारको १ करोड ३० लाख र स्थानीय सरकार दमक नगरपालिकाको १ करोड रुपैयाँ खर्च भएको नगर उपप्रमुख तथा प्रवक्ता गीता अधिकारीले जानकारी दिइन् ।
बस्तीको संरक्षण, सुरक्षा तथा सरसफाइका लागि घर हस्तान्तरणपछि सोही ठाउँमा बसोबास गर्नेहरूको समिति बनाई जिम्मेवारी दिने नगरपालिकाको तयारी रहेको छ ।
दोस्रो बस्ती पूरा
२३ ओटा घर भएको पहिलो नमूना बस्तीको सामुन्ने १५ ओटा घर भएको अर्को बस्तीका लागि पनि घर निर्माण भइसकेका छन् । कुल १ करोड २५ लाख रुपैयाँको लागतमा ती घर निर्माण गरिएको हो । पहिलो चरणमा घर पाउन नसकेका र प्रतिक्षा सूचीमा रहेका विपन्न–भूमिहीनहरूलाई घर प्रदान गरिने वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष भिम पौडेलले बताए ।
नगरमा रहेका सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण हटाई क्रमिकरूपमा यस प्रकारका बस्तीहरू निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ । केही वर्षअघि दमकको पूर्वतर्फ रहेको रतुवा खोलाको बाढी र कटानको समस्या भए पनि अब सो समस्या समेत नरहेको उनले बताए । रतुवामा बलियो बाँध बनाएकाले बाढी र कटान दमकतर्फ प्रवेश गर्ने अवस्थान नरहेको र खोलो नजिकै भए पनि सुरक्षित जमिनहरूमा बस्ती विकास गर्ने उनको भनाइ छ ।
नमूना बस्ती घर संघीय निर्वाचन साझेदारी कार्यक्रम र दमक नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएका हुन् । साझेदारी कार्याक्रम अन्तर्गत १५ वटा घर निर्माणका लागि कुल १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बिनियोजना गरिएको थियो । जस अनुसार प्रतिघर १२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ लागत रहेको जनाइएको छ ।
संघको बजेटमा स्थानीयको थप
दमक–३ मा जनता आवाश कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले पठाएको २८ ओट घर बनाउने पैसामा स्थानीय सरकारले रकम थप गरी स्तरीय घर बनाइदिएको छ । वडाअध्यक्ष नवीन बरालका अनुसार सो कार्यक्रममार्फत प्रतिघर ३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । सो रकमले परिवारका सदस्य संख्याका आधारमा उपयुक्त घर बनाउन अपुग हुने भएकाले नगरपालिकाले प्रतिघर १ लाख ७० हजार रुपैयाँ थप गरेको थियो ।
यस्तै, प्रदेश सरकारमार्फत प्राप्त जनता आवाश कार्यक्रमका लागि समेत प्रतिघर ३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आएकोमा नगरले प्रतिघर १ लाख ७० हजार रुपैयाँ थपेर ५ ओटा घर निर्माण गरेको छ । फुसको छाना हटाउने कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष २०० र यस वर्ष ३५० घरमा जस्तापाता लगाउने योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
जनप्रतिनिधिले बनाइदिए घर
दमककै वडा नं. ३ का जनप्रतिनिधिले निजी खर्चमा समेत एक विपन्न परिवारलाई घर बनाइदिएका छन् । दमक नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालसहितका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पारिश्रमिक तथा प्राप्त सेवा सुविधा बापतको रकमबाट वडाका एक विपन्न परिवारलाई पक्की घर बनाइदिएका हुन् ।
वडा नं ३ स्थित बाघखोर चोकबाट करिब एक किलोमिटर नजिकैको टोलमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएकी ९४ वर्षीया धनमाया लामिछानेसहितको परिवारका लागि वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूले तीन कोठाको पक्की घर बनाएर हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
लामिछाने परिवारको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जमिनमा जनप्रतिनिधिहरूको चार लाख १५ हजारको लागतमा घर निर्माण सामग्री जुटाएको र निर्माण व्यवसायी सुमन काफ्लेले ६५ हजारभन्दा बढी मूल्य बराबरको प्राविधिक खर्च उपलब्ध गराएपछि २० दिन लगाएर घर निर्माण सम्पन्न गरिएको वडा सदस्य सुकदेव लुइँटेलले जानकारी दिए ।
पाँचथर पुर्ख्यौली घर भएका लामिछानेको परिवार करिब ४० वर्षदेखि दमकमा बसोबास गर्दै आएको छ ।